I-Equestrian Kildare Archives - IntoKildare
Ukuvakashela Isifunda Esiphelele ngeke kuphele ngaphandle kokubona usuku lomjaho komunye wemigwaqo yethu yomjaho edume umhlaba wonke noma ukubona amahhashi eduze nase I-Irish National Stud.
Bathi lapho izinganekwane zihlala khona, umlando uyalandela. Inganekwane ithi uFionn mac Cumhaill namaqhawe akhe bagijimisa amahhashi abo emathafeni asendulo eCurragh. Umlando usitshela ukuthi izinqola zamakhosi kanye nezikhulu zangekhulu lesithathu zagijima lapha. Le ndawo eyingqophamlando yaseMpumalanga Yasendulo yase-Ireland isalokhu iyinhliziyo eshayayo yenhloko-dolobha yase-Ireland yamahhashi.
Chitha isikhathi esithile emijahweni - ngemigwaqo eminingi yomjaho egcwele yonke indawo yaseKildare, injabulo yosuku lomjaho ongayithola. Kungani ungahloli izindawo ezisemaphandleni ugibele ihhashi, uhamba ngezinyawo emizileni yezwe, ezigodini ezindala nasehlathini lasendulo. Futhi-ke, alukho uhambo oluya eKildare oluphelele ngaphandle kokuvakashela i-Irish National Stud lapho uzothola khona izinganekwane zamahhashi amakhulu esikhathi esedlule.